गोकुल बाँस्कोटालाई फेरी मन्त्री बनाउँदैछन् केपी ओलीले ? -
गोकुल बाँस्कोटालाई फेरी मन्त्री बनाउँदैछन् केपी ओलीले ?
पौष ११ काठमाडौ । प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अब फेरी मन्त्रीपरिषद पुनर्गठन गर्ने भएका छन् । शुक्रवार प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीपरिषद् बैठक बोलाएका छन् । संसद विघटन पछि उनको यो पहिलो मन्त्रीपरिषद् बैठक हो ।
यस अघि आइतवार प्रधानमन्त्रीले आपतकालिन रुपमा मन्त्रीपरिषद् बैठक राखेर संसद विघटन गर्ने सिफारिस गरेका थिए । मन्त्रीपरिषद्ले गरेको सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सदर गरेकी थिइन् ।बालुवाटार स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार साँझ ६ बजेका लागि मन्त्रिपरिषद बैठक बोलाएका हुन्। प्रधानमन्त्रीको संसद विघटनको निर्णय विरुद्ध प्रचण्ड नेपाल समुह लगायतका विपक्षी दल पनि आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । सात जना मन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा राजीनामा दिएका छन्।
Previous धरहराको २०औं तला पुनर्निर्माण सम्पन्‍न
Next विप्लव समूह र प्रहरीबीच गो-ली हाना-हान